ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: စိတ်ထားပြုပြင်နည်း ခုနှစ်သွယ်
ညချစ်သူ | 12:06 AM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ညချစ်သူ | 12:06 AM |
(၁) ငြိမ်းချမ်းစိတ်၊ ကျန်းမာရေးစိတ်၊ မျှော်လင့်သည့်စိတ်၊သတ္တိရှိသောစိတ်တို့ဖြင့် ပြည့်လျှမ်းနေပါစေ.. .
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လူတို့၏ ဘ၀သည် မိမိတို့စိတ်က ပြုပြင်သမျှ ဖြစ်ရပါသည်။
(၂) ရန်သူကို ဂရုမပြုပါနှင့်၊ ဂရုပြုလျှင် ရန်သူကို ထိခိုက်သည်ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုထိခိုက်စေပါသည်။
(၃) သူတစ်ပါးက ကျေးဇူးမဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သောက ဖြစ်နေမည့်အစားကျေးဇူးမဲ့မည်ကို ကြိုတင်၍ မျှော်လင့်သင့်သည်. . ကျေးဇူးအတင်ခံဖို့မမျှော်လင့်မှ စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ် ရမည်
ဖြစ်ပါသည်. . . . မိမိသားသမီးတို့ကိုကျေးဇူးသိတတ်သည့် အလေ့ရှိစေလိုလျှင်ကျေးဇူး
(၄) ကိုယ့်မှာ ခံစားရသည့် အကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုသာပွားများချို့တဲ့မှုကို နှလုံးမသွင်းပါနှင့်. .
(၅) သူတစ်ပါးကို မတုပါနှင့်. . . နဂိုအနေအတိုင်း ပြုပါ. . .သူတစ်ပါးကို မနာလိုခြင်းသည် အလွန်
ဆိုးရွားခြင်းပင်ဖြစ်သည်. . တုပခြင်းသည်. . မိမိ၏နဂို အရည်အချင်းများကို ချိုးနှိမ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်. .
ကိုယ့်ကိုယ် ကိုသတ်ခြင်းနှင့် တူသည်။
(၆) ကံဆိုးတည်းဟူသော သံပရာကို ရရှိလျှင် ကံကောင်းတည်း ဟူသော သံပရာဖျော်ရည်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပါ
(၇) သူတစ်ပါး အကျိုးဆောင်နိုင်သလောက် ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်သောကကိုဖျောက်ပစ်ပါ. . . "
စာဖတ်သူ ညီအကိုမောင်နှမများ အားလုံးအထက်ပါ နည်းလမ်း (၇)
သွယ်ဖြင့် စိတ်ငြိမ်းချမ်း သာယာမှုရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်. .
Posted by ညချစ်သူ at 12:06 AM